Dastabej » बाँकेमा कहाँबाट आउँछ पाटे बाघको छाला ?
बाँकेमा कहाँबाट आउँछ पाटे बाघको छाला ? – Dastabej
बाँकेमा कहाँबाट आउँछ पाटे बाघको छाला ?
भारतका नेसनल पार्कबाट तस्करी गरिएको पाटेको बाघको हड्डीबाट चीनले(टाइगर वाइन) बनाएर बोतलको ५ सयदेखि १ हजार अमेरिकी डलरसम्ममा विभिन्न मुलुकमा निकासी गर्ने गरेको छ ।
नेपालगन्ज । पाटे बाघ, चितुवा र रेडपाण्डाको छालासहित विभिन्न व्यक्तिहरुलाई प्रहरीले बाँकेबाट पक्राउ गर्दै आएको छ । बुधबार चरी चितुवाको छाला पत्राउ परेको केहीबेरमै पाटे बाघको छालासहित दुई जना पक्राउ परेका छन् । बाँकेमा कहाँबाट आउँछ बन्यजन्तुको छाला ? पछिल्लो १० वर्षमा सरकारी निकायको तथ्यांकअनुसार नेपालका विभिन्न स्थानबाट बाघका ४८ वटा छाला बरामद भएको छ । ती मध्ये पश्चिम तराईका जिल्लामा २३ र बाघको बासस्थान नभएका जिल्लाबाट २१ वटा छाला बरामद भएका थिए । बाँकेबाट काठमाडौं हुँदै नुवाकोट र रसुवा भएर पनि ठूलो परिमाणमा बाघका छाला, हड्डी र अन्य वन्यजन्तुका अंग चिनियाँ बजारतिर तस्करी हुने गरेको छ । भारतका नेसनल पार्क, रिजर्भ र संरक्षित क्षेत्रमा मारिएका बाघका छाला र अन्य अंग नेपाल हुँदै चिनियाँ बजारमा निकासी गर्ने गरिएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले जनाएको छ । चिनियाँ बजारमा बाघका छाला, हड्डी, नंग्रा, दाँत, रगत र यौनांगलगायतको माग अत्यधिक हुने गरेकाले यसको अवैध कारोबार नरोकिएको राष्ट्रसंघीय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भारतसंग सीमा जोडिएकाले बाँकेमा बन्यजन्तु तस्करीको हब बनेको हो । भारतबाट तस्करी गरी बाँके ल्याईका बाघका छाला र हडड्ी सहजै काठमाडौ पुग्न सक्छ ।
तस्करी गर्नेमा भारतका पेसेवर बन्जरिया समूहसमेतको संलगनता खुलेको थियो । सिआईका अनुसार बाघका छाला र हड्डीलगायत तस्करी गर्ने क्रममा बाबरिया समूहहरू विभिन्न समयमा बर्दिया र कैलालीमा पक्राउ परेका थिए । चिनियाँ परम्परागत औषधि, पौष्टिक टनिक र क्रिम बनाउन बाघका अंगको कारोबार हुने गरेको देखिन्छ । म्यान्मार, भियतनाम पनि बाघका अंग प्रयोग गर्ने मुलुकभित्र पर्छन् । चीन र भियतनाममा प्राकृतिकबाहेक घरपालुवा बाघका अंगको समेत तस्करी बढिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चीनले बाघको मासुसमेत बेचबिखन गर्छ ।बाघका अंगमध्ये ४० प्रतिशत परम्परागत औषधि बनाउन प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ । यसको शिरदेखि नंग्रासम्मै र रगत तथा यौनांगको समेत किनबेच हुने गर्छ । थाइल्यान्डमा प्रजनन केन्द्र (घरपालुवा) भित्र सबैभन्दा धेरै बाघ छन् । त्यहींका बाघका अंगको किनबेचका लागि ओसारपसार गर्दा थाइल्यान्डमा बरामदका धेरै घटना भएका हुन् । भारतमा भने प्राकृतिक अवस्थामा विश्वकै सबैभन्दा बढी २ हजार ९ सय ६७ बाघ छन् तर प्रजनन केन्द्रभित्र थोरै बाघ छन् । बरामद भएका अंगको मुख्य स्रोत प्राकृतिक बासस्थानकै बाघ हुन् ।
पछिल्लो आँकडाअनुसार १३ देशको प्राकृतिक बासस्थानमा बाघको संख्या २८५५ देखि ४९८२ छ । धेरै संख्यामा बाघ रहेका देश नेपालसहित भारत, मलेसिया, बंगलादेश, रुस, थाइल्यान्ड, भुटान, इन्डोनेसिया हुन् । दक्षिण एसियाली मुलुकका केही नाकाहरू बाघका अंगको चोरीनिकासीका लागि हटस्पट बन्दै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘भारतबाट नेपाल हुँदै चिनियाँ बजारमा बाघ र तिनका अंगको कारोबार हुने गरेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘भारतबाट सिधै म्यान्मारतिर पनि निकासी हुने गरेको छ ।’ इन्डोनेसियाबाट म्यान्मार हुँदै पनि चिनियाँ बजारमा तस्करी हुने गरेको छ । यस्तै, इन्डोनेसिया, मलेसिया, थाइल्यान्ड र भियतनाम हुँदै पनि चिनियाँ बजारमा तस्करी हुने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
चीनले बाघको हड्डीबाट वाइन (टाइगर वाइन) समेत बनाएको छ । त्यस्तो वाइनलाई चिनियाँहरूले सांस्कृतिक हिसाबले प्रयोग गर्छन् । भियतनामीहरूले भने बाघका अंगबाट विभिन्न क्रिम (टाइगर बाम) बनाउँछन् । त्यस्तो क्रिमलाई उनीहरूले चीनले जस्तै सांस्कृतिक महत्त्व दिन्छन् । बाघको वाइन बजारमा समेत किनबेच हुन्छ । पूर्वी र दक्षिण पूर्वीय मुलुकमा एक बोतल वाइनको ८० अमेरिकी डलरदेखि २९० अमेरिकी डलरसम्ममा बजारमा बिक्री हुन्छ । चीनले त्यस्तो वाइनको एक बोतलको ५ सयदेखि १ हजार अमेरिकी डलसम्ममा विभिन्न मुलुकमा निकासीसमेत गर्ने गरेको छ । बाघका अंग प्रयोग गरी बनाइएको क्रिमको भियतनामी बजारमा १ सय ग्रामको १ हजार अमेरिकी डलरसम्म बिक्री हुने गरेको पाइएको छ । बाघको यौनांग प्रयोग गरी यौनशक्ति बढाउने औषधि (क्रिम) समेत बनाएको पाइएको छ । चीन, भियतनामलगायत मुलुकले बाघका सबैजसो अंग प्रयोग गरी विभिन्न औषधि बनाउने गरेका छन् । बाघको मासु खाँदा मलेरिया र पेटजन्य रोग निको हुने चिनियाँहरूको विश्वास छ । बाघको फोक्सोबाट बनेको परम्परागत औषधिले क्यान्सर निदान हुने विश्वास छ भने पुच्छरबाट छालाजन्य रोग निको हुने औषधि बन्ने गरेको छ । चीन र भियतनामले बाघका २२ वटा अंगलाई विभिन्न औषधि बनाउन प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ ।
१७ असार २०७८, बिहीबार १६:२६ प्रकाशित